Lehibe ny finoanao, tongava aminao araka izay irinao. – filazantsaramada
Publié parfilazantsaramada	 février 22, 2013 février 22, 2013 Laisser un commentaire sur Lehibe ny finoanao, tongava aminao araka izay irinao.
» Ary Izy namaly ka nanao hoe: tsy nirahina aho afa-tsy ho amin’ny ondry very amin’ny taranak’Isiraely. Fa nanatona ihany ravehivavy, dia niankohoka teo anatrehany ka nanao hoe : Tompoko ô, vonjeo aho. Fa Izy namaly ka nanao hoe: tsy mety raha maka ny mofon-jaza ka manipy azy ho an’ny amboakely. Fa hoy ravehivavy: Marina izany tompoko, fa na dia ny amboakely aza mba mihinana izay sombintsombiny latsaka amin’ny latabatry ny tompony ihany. Dia namaly Jesosy ka nanao taminy hoe: Ravehivavy, lehibe ny finoanao; tongava araka izay irinao. Dia sitrana ny zanany vavy tamin’izay ora izay. » Matio 15: 24-38
Midodododo mitady famonjena ny olona amin’ny andro fahoriana, indrindra amin’ny aretina , dia izay manjo ity vehivavy Kananita eto ity izay nanana zanaka vavy nampahorian’ny demonia, ary ny Soratra Masina moa manambara fa mpamonjy mora azo amin’ny fahoriana ny Andriamanitsika. Niantso an’i Jesosy ity vehivavy ity, ary voalaza fa tadiavin’ny mpianatra ho roahina izy satria tena niantso mafy, ary voalazan’ny teksta eto fa tsy avy amin’ny fokon’ny Isiraely fa avy amin’ny Kananita. Nony niantso izy dia namaly azy Jesosy fa tsy nirahina afa-tsy ho amin’ny ondry very amin’ny taranak’Isiraely Izy!
Izao valin-tenin’i Jesosy izao dia toa manisy efitra sakana sahady tsy hiresahan’i Jesosy amin’ity vehivavy ity. Nefa voalaza eto fa nanatona ihany ravehivavy. Mafy loatra angamba ny fahoriana entin’ity ramatoa ity amin’izao aretina mahazo an-janany izao, ka dia nanatona ihany izy. Tsy nanatona ihany ravehivavy fa niankohoka teo anatrehany. Raha mbola nana ambom-po ravehivavy dia tsy nanatona, ary indrindra tsy niankohoka toa izao. Isika koa raha te-hanatona ny Tompo dia mila manetry tena toa izao ataon’ity vehivay ity izao ka hanala ny ambom-po rehetra.
Niankohoka teo anatrehan’ny Tompo ravehivavy sady niantso hoe: Tompoko ô, vonjeo aho. Raha araka izao eto izao, dia tokony hifanaraka amin’ny hataka ataontsika ny fihetsika na ny zavatra rehetra ataontsika, fa tsy tokony hisy ny fifanoherana amin’ny fihetsika sy ny zavatra angatahina.
Fa maninona ary no any amin’i Jehovah, any amin’i Jesosy no hidodododo?
Ny Andriamanitsika dia Andriamanitra efa namorona antsika, ary Andria manitra manambara ny tenany tamin’ny alalan’ny zavatra nataony, ary hita amin’izany ny fahalebiazany sy ny fahaizany. Jehovah no anarany, ary nolazainy fa tsy misy Andriamanitra afa-tsy Izy, dia Andriamanitra marina sady mpamonjy. Isaia 45:21
Hoy ravehivavy taminy: Tompoko vonjeo aho. Fa Jesosy namaly ka nanao hoe: Tsy mety raha maka ny mofon-jaza ka manipy azy ho an’ny amboakely. Ny ondry very amin’ny Isiraely no oharina amin’ny zaza eto, ny famonjena oharina amin’ny mofo. Ny famonjena omena ny ondry very amin’ny Isiraely dia toy ny mofo omena ny zaza, ary foko sahala amin’ny Kananita no oharina amin’ny amboakely. Raha heverina dia tena fanambaniana izao nataon’i Jesosy izao. Na dia efa noharina amin’ny amboakely aza ny zanak’ity Kananita ity, na ity vehivavy Kananita ity, dia mbola nisisika ihany izy: Hoy izy, fa na dia ny amboakely aza mba mihinana izay sombintsombiny latsaka avy amin’ny latabatry ny tompony ihany. Nanaiky oharina amin’ny amboakely mihitsy ity vehivavy ity, mba ahazahoany famonjena. Jesosy na dia tena Andriamanitra aza, tsy nanana ota nefa nanaiky hisolo ny mpanota hitondra ny heloky ny voaheloka na dia tsy meloka aza. Hatraiza ny fanekenao hanetry tena, hiankohoka eo anatrehan’ny Tompo, noho ny fitadiavanao famonjena, ianao aza anefa tena nanota, fa ny an’ity vehivavy ity dia mety ho ny razany no voaozona? Ny zanak’ity vehivavy ity no nila famonjena nefa dia izy no niankohoka teo anatrehan’ny Tompo, ary nanaiky ny fanambaniana toy izao raha azo lazaina hoe fanambaniana izao. Hoy ny Tompo: mijere Ahy, dia ho voavonjy hianareo ry vazan-tany rehetra! Vazantany rehetra: na ny Kananita aza. Ny valiny: nahazo famonjena ilay vehivavy. Dia sitrana ny zanany tamin’izay ora izay. Nahazo fampaherezana izy tamin’ny fiaretany ny fisedrana. Sitrana ny zanany.
Ianao koa, mety misy fahoriana mamesatra anao, manatona ny Tompo Jesosy, ka na dia toa tsy mihaino aza Izy dia aza kivy fa ezaho ny fangatahanao, fa hoy ny Tompo tamin’ity vehivavy ity: Ravehivavy, lehibe ny finoanao: tongava araka izay irinao. Tongava araka izay irinao!
Publié parfilazantsaramada février 22, 2013 février 22, 2013 Publié dansUncategorized